KENYA oo u muuqata inay guuldarro qiratay war cusub-na kasoo saartay kiiska badda - Caasimada Online
Home Warar KENYA oo u muuqata inay guuldarro qiratay war cusub-na kasoo saartay kiiska...
KENYA oo u muuqata inay guuldarro qiratay war cusub-na kasoo saartay kiiska badda
Nairobi (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin haddii si ka dhan ah ay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) u xukmiso kiiska badda Soomaaliya, taasi oo ay qirtay inay u muuqato inay dhici doonto.
Maxkamadda ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku xaqiijisay inay ku dhowaaqi doonta xukunka kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, 12-ka October 2021.
Hase yeeshee, Kenya ayaa wacad ku martay inaysan aqbali doonin wax ay ugu yeertay “hanaan sharci-darro ah,” oo maxkamadda ay u martay kiiskan.
“Waxaan ku soconaa malo ah in xukunka uu noqon doono mid naga soo horjeeda. Habka ay maxkamadda u dhaqantay markii ay la macaamileysay Kenya, oo ay ku jirto inay diiday codsiyo dhowr ah oo qiil lahaa, waa waxa noo tilmaamaya,” waxaa sidaas wargeyska Daily Nation u sheegay sarkaal Kenyan ah.
Sarkaalka ayaa intaas ku daray “Tallaabooyin dhowr ah ayaa la qaaday amni ahaan. Arrintan waa mid leh cawaaqib amniga qaranka ah. Dalka waa inuu xaqiijiyaa amniga iyo badqabka shacabkiisa.”
Sarkaalkan ayaa sheegay, in xitaa Kenya ay aysan aqbali doonin haddii Maxkamadda ay go’aamiso in dhulka la isku hayo loo kala qeybiyo labada dhinac, sababtoo ah buu yiri “waxay ka dhigan tahay in dhul ka mid ah Kenya la dhiibay.”
Kenya ayaa ku doodeysa in maxkamadda ay ula dhaqantay si cadaalad darro, oo ay ku jiraan codsiyo badan oo laga diiday, sida in garsoore Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo Soomaali ah uu iska casilo maxkamadda.
Cabdulqawi ayaa ahaa madaxweynaha maxkamadda tan iyo 2018, waxaana bishii Febraayo beddelay garsoore Joan Donoghue oo Mareykan ah.